वायरल hemorrhagic खरगोश रोग: विवरण, कारणहरू, उपचार र टीकाहरू
Krolikovodstvom धेरै घर मालिकहरु र ग्रामीणों मा मालिकहरु। यो अधिकतर अवस्थाहरुमा लाभदायक छ र धेरै जटिल छैन। यद्यपि, यो विशेषज्ञता को खेतबाट उचित हेरविचारको अवस्थामा मात्र लाभ उठाउन सम्भव छ। सबैभन्दा पहिले, खरगोश राख्दा, तपाईंले सबै प्रकारको संक्रमणको प्रसार रोक्नको लागि अधिकतम ध्यान दिनुपर्छ। अन्यथा, तपाईं चाँडै सबै जनावरहरू गुमाउन सक्नुहुन्छ।
यी पशुहरूको सबैभन्दा अत्यावश्यक रोगहरू VGBK हो। खरगोशहरूको हेमोर्र्यागिक रोगको उपचार बाहिरिएको छैन। वास्तवमा संक्रमणको घटनामा जनावरहरू बचत गर्न कुनै तरिकाहरू अवस्थित छैनन्। VGBC को झुण्डमा प्रचारमा आक्रमण सामान्यतया90% हुन्छ।
एक विशिष्ट उच्च रक्तचाप संग एक विशिष्ट आरएनए युक्त कैल्भेरिइरस को कारण हुन्छ। गतिविधि, र धेरै उच्च, 40-50 डिग्री को तापमान मा, यो पाँच वर्ष भन्दा बढी बचत गर्न सक्छ। सौभाग्य देखि, केवल खरगोश यस क्यालिसेयरस को लागि संवेदनशील छ। अन्य कृषि र घरेलु जनावरहरू, साथै मानवहरू, रेसिज हेमेरारेगिक रोग जस्ता संक्रमित संक्रमित हुन सक्दैन, सक्दैनन्।
VGBC लाई जनावरहरूको संवेदनशीलता धेरै उच्च छ। यो बीमारी कुनै पनि लिंग, सबै युग र नस्लहरु को खरगोश द्वारा प्रभावित हुन सक्छ। रोगको तथ्याङ्क पनि वर्षको मौसममा निर्भर हुँदैन। तथापि, प्रायः VGBK खरगोश शरद ऋतु वा सर्दमा सबै बिरामी हुन्छन्।
वायरल हेमोर्र्यागिक रोगको सबैभन्दा अधिक संवेदनशील3जना भन्दा बढी जनावरहरू हुन्छन्,3किलोग्राम भन्दा बढी। किन जवान खरगोशको शरीर वयस्कों भन्दा राम्रो रोग को प्रतिरोध गर्न सक्षम छ, वैज्ञानिकहरु अझै पनि एक रहस्य हो। प्रायः, अज्ञात कारणहरूका कारणले गर्भवती र स्तनपान महिलाहरूलाई पनि असर गर्छ।
खरगोशको पहिलो भाइरस हेमोर्र्यागिक रोगले चीन-मा Dzyan-Dzu क्षेत्रमा रेकर्ड गरिएको थियो। यस प्राधिकरणका धेरै किसिमले एक दिनमै सम्पूर्ण पशु रन गुमाएका छन्। युरोपमा, क्यालिभेरिरास पहिले 1986 मा आफूलाई देखाइएको थियो। यो समय इटालीका किसानहरूले सामना गर्थे। चीनबाट खरगोश देशमा ल्याइयो तुरुन्तै जनावरहरूको मामला सुरु भयो। दुई वर्ष (1988-1988) मा, VGBAC ले व्यावहारिक रूपले इटलीको सम्पूर्ण क्षेत्र समावेश गर्यो। देशमा 600 अप्ठ्यारो फर्महरू दर्ता भएका थिए। धेरै खरगोश प्रहारहरू मात्र दिवालिया भए। एकै समयमा, इटालियन पशु चिकित्सकहरू र वैज्ञानिकहरू केही परिवर्तन गर्न निर्दोष थिए। उनीहरूले भाइरसलाई समेत पहिचान गर्न सकेनन्, एचबीवी रोगलाई एच।
रूसमा, क्यालिबेरिसका साथ खरगोशको संक्रमण पहिलो यहूदी स्वायत्त जिल्लामा रेकर्ड गरिएको थियो । चीनसँग धेरै सीमानामा, "पूर्वी पूर्वी" खेतमा लगभग सबै जनावरहरू मारिए। दुर्भाग्यवश, पछि देखि, इटली को रूप मा, यस रोग को पहिचान नहीं भएको थियो, यसको प्रसार को रोकन को लागि कुनै कदम नहीं लिया गया। बाहिरी खरगोशहरू मासु प्रसंस्करण संयन्त्रमा चोट लागेको थियो, र खालहरू एक सुन्दर कारखानामा पठाएको थियो। नतिजाको रूपमा, केहि समयपछि रोगले मस्को क्षेत्रमा प्रकट गर्यो। त्यहाँ देशका अन्य भागहरूमा संक्रमणको रेकर्ड गरिएका रेकर्डहरू थिए।
आज सम्म, VGBC युरोपका अधिकांश क्षेत्रहरूमा दक्षिण-पश्चिमी एशिया, अमेरिका र अफ्रिकामा सामान्य छ। यस रोगमा डेटाको व्यवस्थितिकरणमा कार्य अन्तर्राष्ट्रिय ईपिजुट ब्यूरो द्वारा गरिन्छ।
संक्रमण कसरी हुन्छ?
व्यापार को लागि वायरल हेमरोरहैगिक खरगोश रोग को खतरा न केवल उपचार विधियों को कमी र 100% मृत्यु दर को कारण हो, तर यसको कारण पनि बिजुली को प्रसार को कारण हो। यो संक्रमण धेरै तरिकामा प्रसारण गर्न सकिन्छ। प्रायः, जनावरहरूको संक्रमणको उत्पत्ति, उदाहरणका लागि, खेती कर्मचारीहरू। भाइरस सजिलै जूता र लुगाहरूमा सजिलै सहन सक्छ। यसको अतिरिक्त, संक्रमणको स्रोत समावेश हुन सक्छ:
बिरामी जनावरहरु को खाल को अंशहरु।
यो क्यालिसिभिरस र बस हवाई बूंद्रा पारित भएको छ। बिरामी जनावरहरूको खालमा यो तीन महिना सम्म हुन सक्छ।
Hemorrhagic खरगोश रोग: संक्रमण को लक्षण
VGBC को मात्र दुई आधारभूत रूपहरू छन्: बिजुलीको छिटो र तीव्र। पहिलो अवस्थामा, पशुको संक्रमणको क्षण देखि उनको मृत्यु सम्म मात्र केहि घण्टा बित्छ। साँझमा, मालिकहरूले अझै स्वस्थ जनावरहरू खाना तिर्न सक्छन्, र बिहानको तिनीहरूले मृत पाउन सक्छन्। यस अवस्थामा, रोगले आफैलाई नै नैतिक रूपमा प्रकट गर्दैन। जनावरहरू मर्छन्।
VGBC को तीव्र रूप चाँडो विकसित को रूप मा, उदाहरण को लागि, myxomatosis। यस सन्दर्भमा खरगोशहरूको वायरल हेमोर्र्यागिक रोग धेरै दिनसम्म हुन सक्छ। इन्ग्युबेशन अवधि 2-4 दिन हो। त्यसोभए खरगोशहरूले अवसादको लक्षणहरू देखाउन थाले, भूखको कमी, तंत्रिका तंत्रको विकार। पशुले टाउकोको आशंका गर्न सक्छ, टाउको झुकाउँछ। यस अवस्थामा, खरगोश पीडित, दुर्व्यवहार वा स्क्वाच।
रोगको अन्तिम चरणमा, एक पहेंलो रातो तरल जनावरहरूमा नाक एपर्चरबाट सुरु हुन्छ। VGBC को तीव्र रूप संग जनावरहरु को मृत्यु देखि पहिले बीमारी को पहिलो संकेत को रूप देखि, 1-2 दिन देखि अधिक नहीं। संक्रमित गर्भवती खरगोशहरू सधैं भेदभावहरू छन्।
खरगोशहरूको भाइरस हेमोर्र्यागिक रोगले यसको नाम पाएको तथ्यले गर्दा मृत जनावरहरूको शव फेला परेको पशु पशुपक्षीहरूले लगभग सबै आन्तरिक अङ्गहरूमा धेरै हेराइरेज पत्ता लगाउँछन्। यस अवस्थामा, सबै खरगोशहरू लिभर र गुर्देहरूले प्रभावित हुन्छन्। मृत्यु पछि पशुहरूको रगत एक लामो समयको लागि कम गर्न सकिँदैन।
विशेष गरी कडा आन्तरिक अङ्गहरू वयस्क जनावरहरूमा असर पर्छन्। बिस्तारै खरगोशको लिभर बढ्दै गएको छ र सजिलै संग फलाबी स्थिरता को कारण फट्यो। रंगको यो अनैतिक छ - पहेंलो-खैरो, कहिलेकाहीँ रातो टन्ट संग। यो एक संक्रमित खरगोश को लिभर मा छ कि क्याल्सिसिवस को वृद्धि एकाग्रता छ। मूलतः, यसको गुणनको कारण, यसको प्रकार्यको उल्लङ्घन हो।
VGBC बाट मृत्यु भएको खरगोशमा धुरी, थोपा बढ्दो छ, सँगै एक अस्थिर स्थिरता र अप्राकृतिक (यो समय एक गाढा बैंगनी) रङ छ। बिस्तारै खरगोशको गुर्दे रगत भरिएका हुन्छन्, र जठरात्रिक मार्ग क्याटर्रल हो। आंतनमा, धेरै हेराइरोजहरू देखा पर्छन्।
कुन खरगोशहरू मर्छन्
संक्रमित जनावरहरु को मृत्यु, लिभर विफलता को बावजूद, पुर्मनरी edema को परिणाम को रूप मा हुन्छ। यो ठीक छ यी दुई अङ्गहरु को तीव्र हार हार को रोग को पाठ्यक्रम को बिजुली को तेजता बताईन्छ। मरेका जनावरहरूको फेफड़ों खतरनाक हुन्छ र तीव्र गतिमा। तिनीहरू अविश्वसनीय रूपमा रंगित छन्, र बहुराष्ट्रिय बिन्दु र भित्ता हेमोर्रेजहरू पुरूषमा देखा पर्छन्।
यस तथ्यको बावजूद कि क्यालीफोर्स VGBC धेरै तरिकामा फैलियो, यो अझै पनि जनावरहरूको संक्रमण रोक्न सम्भव छ। निस्सन्देह, रोगको विकासमा अवरोध हुनु पर्छ, अन्य चीजहरू बीच, खरगोशमा सेनेटरी स्तरहरू अनुपालन गर्नुपर्छ। कक्ष र पिराहरू समयमा सफा गरिनुपर्छ। सबै निस्फोटकहरु लाई calcivirus को मार नहीं। यसैले, खरगोशको प्रक्रियाको लागि विशेष गरी डिजाइन गरिएका विशेष उपकरणहरू मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।
जानवरहरूको लागि खरिद गरिएको फिडमा अधिकतम ध्यान र गुणस्तर दिन महत्त्वपूर्ण छ। ग्रेन र मिश्रित चारा राम्रो प्रतिष्ठाको साथ राम्रो तरिकाले खेतहरूमा किन्न सकिन्छ।
खरगोशहरूको विराल hemorrhagic रोग: टीका (किस्महरू)
कक्षहरू राख्ने र गुणस्तर जौ र जामहरू खरिद गर्नाले रोगलाई फैलाउने जोखिमलाई कम गर्न सक्छ। तथापि, केवल विश्वव्यापी टीकाकरणले VGBC बाट खरगोशहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्नेछ।
यद्यपि VGBK लाई उपचार गरिएन, यसको विरुद्धमा यो वैक्सीन वैज्ञानिकहरु द्वारा बनाईएको थियो। र यो खेतहरूमा धेरै विकल्पहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ:
Associated lyophilized (hemorrhagic खरगोश रोग, माइक्सोमैटोसिस विरुद्ध टीका);
एल्युमीनियम हाइड्रोक्साइड निष्क्रिय;
लियोफिलिलाइटेड ऊतकको तीन प्रकार (फर्मोल, टोटोट्रोपिन र थर्मो-टीका);
निष्क्रिय, एचबीवी र पेस्टुर्रेजा विरुद्ध प्रयोग गरिएको।
सूक्ष्म जीवविज्ञानीहरू मात्र खगोलीयको वायरल हेमोर्रेगिक रोग विरुद्ध नै यो टीका नै विकसित भएन, तर यो पनि एक विशेष सीरम। यो उपचार राम्रो छ किनकि यसले यसको सुरक्षात्मक प्रभाव देखाउँछ intramuscular इंजेक्शन पछि दुई घण्टा भित्र।
यस्तो रोगको उपचारका लागि विशेष माध्यमहरू, खरगोशको भाइरल हार्मोरहैगिक रोगको रूपमा, अवस्थित छैन। यद्यपि, केहि अवस्थाहरूमा, ती जना जनावरहरूसँग पहिले नै रोगको क्लिनिकलल लक्षणहरू (पहिलो) माथि वर्णन गरिएको सीरम व्यवस्थापन गरेर सुरक्षित गर्न सकिन्छ। तर, निस्सन्देह, तपाइँ यस मामलामा ग्यारेन्टी नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न।
VGBK बाट प्रोफाइलैक्टिक इंजेक्शनहरू एकपटक 1.5-3 महिनाका जनावरहरू द्वारा जान सकिन्छ। टीकाको क्षेत्रमा हेमोर्र्यागिक खरगोश रोग विरुद्ध एक टीका पेश गरिएको छ। स्थिर प्रतिरक्षा इंजेक्शन 6-8 महिना पछि जनावरहरूमा कमजोर छ। खरगोश, मासुको लागि बोसो, सामान्यतया पहिले नै मरेका छन्। यसकारण, टीकाकरण दोहोर्याउन आवश्यक छैन। निर्माताहरु छ महिना को आवधिकता संग इंजेक्शन को लागी मानिन्छ। गर्भवती खरगोशहरू भ्रूण विकासको कुनै पनि चरणमा टीकाकरण गर्न अनुमति दिइएको छ।
गोभी रोपण - यो सजिलो छ
अंगूर मुद्रांकन - रसदार गुच्छा र बलियो गोलीहरु को बाटो
सुँगुरको मुहार कसरी छ?
डमी कार्यशाला कसरी छनौट गर्ने - मापदण्ड र सिफारिसहरू
के बालिका लागि शरद ऋतु कोट हुनुपर्छ
Pleuralopathy periarthritis: उपचार, कारणहरू, लक्षणहरू
Imbitsil - यो हुनुहुन्छ? हामी कति भन्न कि शब्दहरूको अर्थ बुझ्ने?
रासायनिक थर्मोडायनामिक्स: सक्षम वा अक्षम
Determinate टमाटर र आफ्नो विशेषताहरु
आयोडिन कमी। आयोडिन मा धनी खाद्य पदार्थ
परिवार पाल्तु जनावर - Cocker Spaniel
मोबाइल बाट एक विस्तार नम्बर डायल गर्न कसरी विवरण